Heshiisyadii La Dhamaystiray Saacadihii La Soo Dhaafay Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Caawa Qoreen Wargaysyada Yurub. - Gool24.Net
Heshiisyadii La Dhamaystiray Saacadihii La Soo Dhaafay Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Caawa Qoreen Wargaysyada Yurub.
Habeen wanaagsan ama waqti kasta oo aad joogto oo wacan, akhristayaasha sharafta iyo xushmada naga mudanow ku soo dhawaada barnaamijka wargaysyadu waxay qoraan iyo wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ee ay caawa qoreen wargaysyada Yurub.
Kooxaha Premier League ayuu waqtigu ka ordayaa maadaama oo suuqa kala iibsiga England uu xidhmi doono maalin ka hor bilawga xili ciyaareedka cusub ee Premier League kaas oo hadda culays ku abuuraya kooxaha saxiixyada muhiimka ah suuqa ugu jira.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo ururisay wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo waxyaabihii ay caawa ka qoreen wargaysyada Yurub.
Manchester United ayaa dib ugu soo laabtay xiisihii ay waqiga dheer u haysay difaaca kooxd Barcelona ee Samuel Umtiti waxayna rajaynayaan in ay dalab €50 milyan yuro ah ka gudbiyaan. ( Le10 Sport)
RASMI: Liverpool ayaa heshiis waqti dheer ah ka saxiixatay difaaca aadka loo qiimeeyo ee Ki-Jana Hoever kaas oo mustaqbalkiisa waqtiga dheer u hibeeyay kooxdiisa Liverpool.
RASMI: Liverpool ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in difaaca da’yarka ah ee Rhys Williams uu heshiis amaah ugu biiray kooxda Kidderminster Harriers, wuxuuna ku maqnaan doonaa qaybta hore ee xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020.
RASMI: Goolhayaha da’yarta ah ee kooxda Real Madrid ee Mohamed Airam Ramos ayaa heshiis amaah hal xili ciyaareed ah ugu biiray kooxda horyaalka heerka labaad ee England ee Birmingham City.
RASMI: Xidiga reer Germany ee André Schürrle ayaa amaah hal xili ciyaareed ah ugu biiray kooxda horyaalka Russia ee Spartak Moscow wuxuuna ka dhaqaaqay kooxdii uu ka tirsanaa ee Borussia Dortmund.
Xidiga Man United ee Axel Tuanzebe ayaa xiiso ka helaya kooxda Newcastle laakiin Manchester United ayaa marka hore shuruud ka dhigaysa in ay hesho difaaca Leicester City ee Harry Maguire. (Daily Mail)
Wakiilka ahna walaalkaGonzalo Higuaín ee Nicola ayaa maanta wada xaajood la yeeshay maamulka kooxda Roma si uu Higuaín marka hore heshiis amaah ah ugu wareego Roma kadibna ay si rasmi ah ugula wareegi karaan €36m. (Calciomercato)
Paulo Dybala ayaa la filayaa in uu barri wada hadal la gali doono macalinka kooxdiisa Juventus ee Maurizio Sarri iyo agaasimaha ciyaaraha Fabio Paratici si loo xaliyo mustaqbalkiisa iyada si wayn loola xidhiidhinayo Manchester United. (romeoagresti)
Kooxaha Barcelona iyo Zenit St Petersburg ayaa heshiis ka gaadhay iibka xidiga reer Brazil ee Malcom iyada oo labada kooxood ay heshiis ku gaadheen 40 milyan gini. Agaasimaha ciyaaraha kooxda Zenit ee Javier Ribalta ayaa u duulay magaalada Barcelona si uu heshiiska Malcom u soo dhamaystiro. (Sky Italia)
Kabtanka kooxda Arsenal ee Laurent Koscielny oo doonaya in uu ka baxo Gunners ayaa xiiso ka helaya kooxda Rennes waxayna Laurent Koscielny iyo Rennes doonayaan in ay heshiis xor ah ay isla gaadhaan laakiin Gunners ayaa doonaysa in ay wali ku doodaysa in uu heshiis ku jiro xidiga reer France. (Sky Sports)
Arsenal ayaa ku dhaw in ay soo gaba gabayso heshiiska difaaca kooxda Celtic ee Kieran Tierney kadib markii ay wax ka badaleen qaabkii uu u dhignaa dalabkii 25 ka milyangini ahaa ee ay hore ugu direen kooxda Celtic. (Daily Mail)
José Mourinho ayaa u sharaxan in uu qabto shaqada tababaranimo ee kooxda horyaalka Spain ka dhisan ee Valencia. (Libertad)
XAQIIQ: Madax waynaha Lille ee Gérard Lopez ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in kooxda Arsenal ay 80 milyan yuro ka bixinayso xidiga reer Cameroon ee Nicolas Pépé . Akhriso
La soco wararka suuqa ee soo kordha